Yakatumirwa ne Tranquillus | Sep 22, 2018 | Kuvandudza wega
Paunenge uchifara, kuratidza mufaro uye mufaro waunonzwa mukati mukati chinhu chiri pachena. Uyezve, zviri nyore kusvika ipapo. Izvi hazvisizvo kana takakundwa nemanzwiro asina kunaka sekutya, kutsamwa kana kunyangwe kusuruvara. Tsvaga mhinduro kwayo!
Taura kana kuzvivhara?
Kana zvasvika kune mafungiro akanaka semufaro, tinowanzoda kugovana. Uyezve, zvinongoerekana zvichiratidzwa kuburikidza nemeso uye chiso. Izvozvo zvakati, inofanira kunge yakaratidzwa nenzira inonzwisisika. Zvechokwadi, tinofanira kuita nekudzivisa. Kudanidzira kana kuita zviratidzo zvisina musoro pamberi pevamwe vanhu kana vatorwa chinhu chakaipa.
Kana zvasvika kuneMafungiro asina kunaka, basa racho rakaoma zvikuru. Kune rumwe rutivi, kuzviratidza kune rusununguko, kunopa hutano hwakanaka. Asi kune rumwe rutivi, zvinowanzotaurwa kuti kunyarara ndicho chakanakisisa kana munhu akaremerwa nemanzwiro asingafadzi.
Zvechokwadi, patinotaura nehasha, tinouya kutaura zvinhu zvatingademba shure. Saizvozvowo, patinenge tichishungurudzika kana patinotya, tinowanzoita zvakanyanya uye zvisina musoro.
Tinofanira here kudzvinyirira manzwiro ake uye kuzvivharira? Aihwa ! Izvi zvinogona chete kukonzera kumwe kunetseka. Kune rimwe divi, iwe unofanirwa kuita zvine hungwaru nekuyedza kuburitsa zvaunonzwa nenzira inovaka. Ndeipi mirayiridzo yekushandisa?
Kutora nhanho kumashure kwakakosha!
Pasina mubvunzo, usati wataura chero chinhu, chinhu chekutanga chekuita ndechokuti uone kuti unonzwa sei mumoyo mako. Izvi zvinonzi kutora danho shure. Uyu danho ndiro guru. Inogona kukudzivisa kusaita nekukurumidza nekuita zvikanganiso.
Somuenzaniso, mutariri wako anokupa mhosva yehutano hwebasa rako. Kurwisa pakarepo kunogona kuita kuti zvinhu zviwedzere. Zvechokwadi, unogona kuita mazwi anonyadzisa uye anonyadzisa kana kuita chiito chisina kukodzera.
Iko kuburikidza nokutora danho shure kuti tinokwanisa kunzwisisa zviri nani mamiriro ezvinhu uye kuziva manzwiro ake. Tinofanirawo kuedza kuzvidzora kana zvichifanira. Nokushandisa iyi sarudzo, iwe uchaona nzira yakanakisisa yekuita nayo.
Panguva imwecheteyo, iwe unofanirwa kusarudza kana iwe uchida kugovera zvaunonzwa kana kwete. Yambiro! Zviri kunze kwemubvunzo kutora danho zvishoma. Kana tikasarudza kuburitsa manzwiro edu, tinofanira kuzvibvunza pamusoro pezvikonzero uye nemhedzisiro.
Mune mamwe mazwi, zvakakosha kuziva chikonzero chechiito chakadaro. Mukuwedzera, pane dzimwe nguva zvakakosha kuti urambe wakangwara pane chinangwa icho munhu anoda kuti asvike nekugoverana manzwiro kunyanya.
Tsvaga mutauro wakarurama
Nzira yaunenge uchitaura nayo inogona kukanganisa mufambiro wako wekutaurirana. Ndosaka zvakakosha kusarudza mutauro wemunhu uye fungisisa pane zvichataura. Mutemo wekutanga wekuremekedza ndeyekutaura dambudziko iri nenzira inangwa. Nguva dzose fungisisa nezvechokwadi.
Nekudaro, zvakafanira kurega kuita kutonga, fungidziro kana kududzira. Kuti zvive zvakajeka, isu tinofanirwa kuyeuka chokwadi sezvazviri. Semuenzaniso, une musangano neako koreji na8 mangwanani Anonoka. Kana yasvika, haufanire kuipomera kuti "Uri kunonoka kusvika nechinangwa here?" ".
Zvirinani kutaura kuti: “takatarisana nenguva dza8 mangwanani; Na8: 30 am, ndanga ndakakumirirai kwehafu yeawa ”. Izvi zvinodaidzwa kuzviratidza nekujeka uye nekujeka.
Tsanangura manzwiro ako nechivimbo
Zvechokwadi, zvinorambidzwa kuita kutonga. Asi izvi hazvirevi kuti tinofanira kuvanza zvatinonzwa. Zvingave kuora mwoyo kana kutsamwa, zvakakosha kutendera mufonesi wako kuziva. Izvi zvinomubvumira kuti aone kuwanda kwezviito zvake uye kuzviisa pachake.
Ziva kuti iwe unogona kuratidza manzwiro ako kuburikidza nhengo dzekuita kana mazwi. Kutaura kwevanhu vasingatauri kazhinji kazhinji kunonzwisisika kupfuura mazwi. Somuenzaniso, hazvibviri kuziva kana munhu achitaura nekuseka kana kusakosha kana asingarati kuburikidza nemafungiro ake kana mazwi ake.
Izvozvo zvakati, isati yatanga, munhu anofanira kutanga aona zviratidzo zvake zvemumuviri uye zvinokonzera. Iyi ndiyo nzira yatinotarisira nayo nekudzigadzirisa zviri nani. Mukuwedzera, zvakakosha kutsvaga pfungwa dzakaipa dzinokonzera kushungurudzika. Tinofanira kuramba tichifunga.
Kufambira mberi mhinduro
Kuratidza manzwiro nenzira dzakakudzidza zvakare kuziva nzira yekugadzirisa mhinduro. Zvechokwadi, hazvina kukwana kutyora. Izvo zvakanaka ndeyekupedza shanduko nezwi rakanaka.
Nokudaro, kana mutauriri wako akaziva manzwiro ako, unofanira kutaura zvaunoda kuita. Mukuwedzera, mamwe mashoko uye mamiriro ezvinhu pamusoro pechiratidzo chacho anofanira kuwedzerwa.
Mumamiriro ese ezvinhu, unofanira kushandisa mazwi akafanira. Kukanda kutyisidzira kana kutaura kunonyadzisa chinhu chakaipa. Izvi zvinogona kungotungamirira kumamiriro ezvinhu akaipa. Asi chinangwa hachisi kugadzira kupesana nemutauriri wako, asi kuzvitsanangura iwe kuti uchinje zvinhu.
VERENGA Nzira yekugadzirisa zvinangwa zvinokwanisa sei?
Kugadzirira kwakanaka kunokosha!
Zviri pachena kuti kuzviratidza nenzira yakavaka, munhu anofanira kunge akagadzirira kutarisana nemudzimai wake, saka chikonzero chekutora danho shure. Tinofanira kuzvipa pachedu nguva yekudzidza nzira yekuratidza manzwiro nekuzvidzora. Mukuwedzera, iwe unofanirawo kugadzirira kugamuchira manzwiro emukati wako. Saka tinogona kuwirirana nenzira yakangwara.
Zvose izvi zvinoda basa rekufambira munhu oga. Mumwe anofanira kudzidza kudzidza maitiro ake akadaro uye mamiriro ake ezvinhu. Izvi ndizvo zvinoita kuti zviitwe.
Muchidimbu, kuratidza manzwiro ako mune nzira dzinovaka ibasa rakaoma rinoda basa rega pachako. Mumwe anofanira kutora danho shure, dzidza kudzora manzwiro uye manzwiro ekufunga. Iwe unofanirawo kusarudza mazwi ako uye kuziva kuti ungataura sei nechivimbo.
Pakupedzisira, hatifaniri kugutsikana nekutsoropodza. Izvo zvinodiwawo kupa mhinduro.
Kushungurudzika, tora danho shure uye utaure manzwiro ako nenzira dzinovaka. November 21st, 2018Tranquillus
pashureNzira yekugutsikana sei mune unyanzvi hwokugadzirira?
zvinoteveraKutsoropodza kunogadzirisa kuitora, kuigamuchira.